Kodzero-dzevanhu, 04 Mbudzi 2017
Mugovera 4 Mbudzi 2017
Zimbabwe yange iri mugango kumusangano weAfrican Union unoona nezve kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu kana kuti African Commission nn Human and People’s Rights.
Mapato makuru anopikisa munyika, anosanganisa MDC-T, National People’s Party nemamwe masangano akazvimirira oga, apa Ishe Fortune Charumbira mazuva gumi ekuti vakumbire ruregerero.
Sangano rinoongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira, reZimbabwe Election Support Network, kana kuti ZESN, rinoti kune zvakawanda zvinoda kugadziriswa munyaya dzekunyoreswa kwevavhoti.
Hurumende Inoti Haina Mari Yakawanda Ingaenda kuBazi reHutano
Mabasa ehutano munyika anotarisirwa kuramba achidzikira gore rinouuya mushure mekunge bazi rezvemari razivisa kuti harina mari yakawanda yekupa bazi rezvehutano mubhajeti yegore rinouya.
ZEC Yovimbisa Kugadzirisa Matambudziko Ari Kutadzisa Kufamba kweChirongwa cheBVR
Boka rinoona nezvesarudzo munyika, reZimbabwe Electoral Commission, ZEC, neChitatu rakaita musangano nevamiriri vemapato ane nhengo muparamende anoti Zanu PF, MDC, neMDC-T pamusoro pezvimhingamipinyi zvinonzi zviri kutadzisa vanhu vakawanda kunyoresa kuvhota.